Budata ComboFix 17.10.14.1 maka Windows
Ikpo okwu: Windows |dị: 17.10.14.1 Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Windows (5.40 MB)
Na ComboFix, ị nwere ike ihicha nje mgbe akụrụngwa antivirus gị anaghị arụ ọrụ ComboFix bụ sọftụwia nwepu nje nwere ike iji ma ọ bụrụ na malware wakporo kọmputa gị dịka nje, trojans, rootkits, adware, spyware, malware na antivirus gi adighi egbo mkpa gi iwepu ngwanro ojoo a. Combofix nwekwara ike wepu nje virus na-emebi ọrụ kọmputa gị nke ọma, dịka amvo.exe. ComboFix bụ sọftụwia mepụtara iji rịọ ndị ọrụ kọmputa na ndị ọrụ teknụzụ tozuru oke.
Akụrụngwa nwere ike ịnweta akụkụ ọ bụla nke kọmputa gị ma nwee ike nyochaa sistemụ gị nụzọ dị ukwuu na ngwanrọ antivirus enweghị ike ịme.Nihi nke a, ọ na-atụ aro ka ị gbanyụọ gị antivirus software na-adịghị na-agba ọsọ ọ bụla omume na ndabere mgbe ị na-eji software. Na mgbakwunye, sọftụwia na - amaliteghachi kọmpụta gị na - akpaghị aka mgbe ị nyochachara, yabụ anyị na - akwado ka ịchekwaa azụmahịa gị mgbe ị na - agba ComboFix. ComboFix nwere njirimara nhicha USB yana yana ihicha malware nke na - egbochi ọrụ kọmputa gị ma gbanwee ntọala ihe nchọgharị gị.
Na ComboFix, ị nwekwara ike iweghachite mkpanaka USB gị nke Autorun virus sụgharịrị ka ọ ghara iji ya rụọ ọrụ. Nụzọ dị otu a, enwere ike iweghachite flash draịva na diski mpụga ka ọ dị na mbụ Combofix nwere ike ihicha amvo virus na-agbanwe usoro nke folda gị. Amvo.Combofix, otu nime sọftụwia ole na ole ị nwere ike iji maka iwepụ nje exe, nwere ike ịchọta amvo.exe ngwa ngwa wee nyekwa mwepụ mgbọrọgwụ amvo site na ihichapụ ComboFix kpamkpam, anyị anaghị akwado iji ComboFix dịka standalone antivirus software; Nihi na ngwanrọ a bụ nje na-ewepụ ngwa ngwa enwere ike iji ya mgbe achọrọ ya.
Ngwaọrụ a, nke anaghị enye ezigbo nchekwa maka kọmputa gị, anaghị egbochi nje ị banye na kọmputa gị, ọ na - enyere aka wepu nje ndị batara na kọmpụta gị na ịnweghị ike ịnagide ya. Mgbe ComboFix na-arụ ọrụ nyocha na nhicha nhicha, ọ na-akọ na achọpụtara ma kpochaa nje na faịlụ ederede.Enwere ike iche Combofix dị ka ngwa enyemaka mbụ ma ọ bụrụ na ị nwetaghị nsonaazụ site na usoro mwepụ nje virus dịka antivirus. Ebumnuche bụ isi nke software ahụ bụ ịchọpụta nje ndị na-enweghị ike iwepụ site nụzọ nkịtị na wepu nje ndị a achọpụtara site nụzọ ọzọ.
Nụzọ dị otú a, ịnwere ike ịlaghachi kọmputa gị, nke nwere nsogbu nihi nje na arụ ọrụ ya, na arụ ọrụ ya site na enyemaka nke Combofix ma ị nwere ike ịga nihu na-eji kọmputa gị nenweghị nsogbu ọ bụla. Mgbe ejiri sọftụwia ahụ akpachapụghị anya, ọ nwere ike ibute sistemụ gị iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere ojiji nke ComboFix, ị nwere ike ịlele nke anyị bụ ComboFix, Otu esi eji ya.Tupu itinye Combofix software na nje mwepụ azụmahịa, ị kwesịrị ị na-elele ndị ọzọ nche omume na anyị na saịtị; Agbanyeghị, mgbe mmemme ndị a anaghị egbo mkpa gị, anyị na-akwado ka ị jụọ ComboFix.
Nha faịlụ: 5.40 MB
Kacha ọhụrụ na: 03-04-2021